Indlu yasemaphandleni kwilali entle yasentabeni
Gramedo, Principado de Asturias, Spain
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAlojamiento
Le ndlu ithokomele kwaye izolile ikwilali yaseGramedo, eyeMieres (Asturias).
Relax kwindawo yendalo kwindawo efanelekileyo yokuzola kunye nokuphumla ekwabonelela ngazo zonke izinto eziluncedo: iWiFi, iTV kunye nezixhobo zangoku.
I-Oviedo kunye ne-Gijón yi-30 kunye ne-35 imizuzu kude ngemoto ngokulandelelana kwaye i-Valgrande-Pajares ski slope i-40 imizuzu kude.
Ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-5, apha uya kufumana yonke into oyifunayo ukuze uhlale ungalibaleki.
Indlu yohlulwe ibe yimigangatho emibini
Njengoko kunokubonwa kwiifoto, ipropathi inezi zithuba zilandelayo:
-Umnyango onevaranda okhokelela kwigumbi lokuhlala.
- Indawo yokuhlala yegumbi lokuhlala ye-22 m2 enekona ye-sofa chaise longue, iTV kunye netafile yabantu aba-4.
-Ekupheleni kwegumbi, umnyango okhokelela ngqo kwintendelezo, esecaleni lomnyango wendlu.
Kumgangatho omnye, igumbi lokuhlambela eli-1 elineshawari ye-hydro-massage, isiporo sombane setawuli kunye nesomisi.
-1 yangasese esecaleni kwendawo yokuhlambela.
-Amagumbi okulala ama-3 aneebhedi ezingatshatanga (enye yi-80cm enkulu) kunye negumbi elinye elinamagumbi amabini anebhedi enkulu elingana nokumkanikazi, 150.
-I-Patio efakwe kwii-railings kunye ne-pergola shading itafile enkulu kubantu be-4 abanezihlalo ezibini ezongezelelweyo. Eyona nto ilungileyo ngepatio ziimbono ezintle zeentaba. Ikwanayo nebarbecue, nangona ingabonelelwanga ngamaplanga okanye amalahle.
Yindawo efudumeleyo neyamkelekileyo esetyenziswayo nelungiselelwe ukubonelela ngeyona ndawo yokuhlala ilungileyo yondwendwe.
IGramedo yilali encinci yaseAsturian enezindlu ezili-15 ezibekwe kumgama oziikhilomitha ezisi-7 ukusuka kwikomkhulu likamasipala, iMieres.
Indalo yi-protagonist engenakuphikiswa yendawo. Singaqhubeka ngonaphakade, kodwa singacebisa ngokukhethekileyo ukutyelela iTurón Valley. Kule mihla, kukho iindwendwe ezikhokelwayo ezinomdla kakhulu ezibonisa zombini indawo kunye nenyaniso yemigodi yendawo (kukho umgodi omdala weentaba ukusuka ekupheleni kwekhulu le-19). Kulapha apho unokufumana inqaba yemigodi kuphela ngaphambi kweMfazwe yamakhaya. Ukuba unomdla kwishishini lemigodi, kwidolophu yase-El Entrego uya kufumana enye yeemyuziyam zemigodi, ebonisa isithethe semigodi e-Asturias. Sishiya ikhonkco kwiphepha layo kwiSikhokelo seeNdwendwe apho unokufumana khona iinkcukacha ezithe vetshe.
Unokwenza iindlela zakho kule ntlambo. Eyona "ilula" yinto ebizwa ngokuba yiVía Verde del Valle de Turón. Ubume bendlela ehamba kuyo yindlela evulekileyo kakhulu, esebenzisa umzila kaloliwe phantse yonke indlela.
Iqala kwibhulorho yaseRicastro (kufuphi ne-Uxo), apho i-siding kunye nolwakhiwo lukaloliwe oluncedisayo lwalubekwe, kwaye ibaleka phantse iikhilomitha ezi-3 ecaleni komsele omdala wegeji ebanzi eyinxalenye yothungelwano olubonelelwa yinkampani ephambili kule ndawo: Hulleras del I-Turón, inkampani eyasekwa ekupheleni kwenkulungwane ye-19 kunye ne-subsidiary ye-Altos Hornos de Vizcaya. Indawo ezingqongileyo iphantse yazidolophini kwaye ayinabunzima.
Ukuba indalo yase-Asturian sele inomtsalane ngokwayo, iba ngumdla xa sibona ubugcisa beBronze Age kwimiqolomba yayo. Sithetha ngomqolomba wobugcisa bePeña El Rebullusu (Mieres), olulundwendwelo oluphantse lube sisinyanzelo.
Ezinye iindawo ezifanele ukutyelelwa zezi: Oviedo (isixeko), iGijón (isixeko) kunye nolwandle lwaseGijón.
Umbuki zindwendwe ngu- Alojamiento
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo ephakamayo, nceda ungalibazisi ukubuza. Ndingakuvuyela ukukunceda. :)
Inombolo yomthetho: VV.1634.AS.